Shina avo aryry tokana Lighting pole for Sports Field mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Home > Products > avo andry tokana Lighting Pole > avo andry tokana Lighting pole for Sports Field
Fahazavana marika vokatra momba ny hazavana LED:
Â · Fangatahana antonony ho an'ny miaramila, mody fanina (raha takiana)
Â · Ny famolavolana hazavana matihanina matihanina, manakana ny fitiliana sy ny fiparitahana ary manatsara ny fampiasana ny loharanom-pahazavana amin'ny haavo 25,6% raha ampitahaina amin'ny jiro LED ankapobeny;
Â · Vatoy jiro nafarana avy any ivelany, fanantenana 50 000 ora;
â € ¢ Nanandrana mifanaraka amin'ny fenitry ny IESNA-LM-79 (Fikambanana jiro amerikana avaratra).
Fanidiana: rakotra miaraka amina polyester anti-corrosive ary novolavola niaraka tondraky ny hafanana hiantohana ny fiparitahana ny hafanana ambony sy ny fiainana LED lava.
Anti-glare: famolavolana optika natao, maivana malefaka, mahomby hisorohana ny glare;
Tondro fanilo: Taratasy mazava ny tondrozotra marina
Drafitra fizarana jiro:
Ny jiro stadinay dia manana fomba fizarana hazavana isan-karazany toy ny tery, antonony ary malalaka, ary afaka misafidy ny fizarana hazavana mifanaraka amin'ny tena filan'ny toerana.
Buy avo andry tokana Lighting pole for Sports Field nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba avo andry tokana Lighting pole for Sports Field ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized avo andry tokana Lighting pole for Sports Field Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.